काठमाडौँको इन्द्र चोकमा कोरोना भेटियो – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/काठमाडौँको इन्द्र चोकमा कोरोना भेटियो
काठमाडौँको इन्द्र चोकमा कोरोना भेटियो
काठमाडौँ । पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाको समुदायमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकाकाबिच असनका एक महिला र एक पुरुषमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । कोरोना संक्रमणको शिकार बनेका उनीहरु दिदी र भाइ भएको बताइएको छ । उनीहरुले असनमा पसल गर्दै आएको र उनीहरुसँग भारतको सीतामढीबाट काठमाडौं फर्किएकी एक महिला परीवारमा घुलमिल भइ बसेका कारण कारण संक्रमण भएको बताइएको छ । ओली सरकारले हचुवाका भरमा विज्ञहरुसँग गतिलो सल्लाह नै नगरी एक्कासी लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेकै कारण भारतबाट नेपालमा धमाधम मानिसहरु भित्रिन थालेपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको ठूलो जोखिममा परेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० का वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमप्रसाद कोइरालाका अनुसार असनमा पसल संचालन गर्ने दिदीभाइलाई ज्वरो, सुक्खा खोकी र सास फेर्न गाह्रो हुने देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा नतिजा पोजिटिभ देखिएको भएता पनि उनीहरुसँग भारतबाट आएकी महिला कसरी सम्पर्कमा पुगीन् ? यसरी भारतबाट आउने ब्यक्तिलाई किन सीमानामा रोकिएन ? किन परिक्षण गरिएन ? यो प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? ओली सरकारका जिम्मेवार स्वास्थ्यमन्त्रीको घरमा पाहुना आएको भए उनले नभ्याउन सक्लान् । तर सचेत र जिम्मेवार सिंगो सरकार नबनी कुर्चिकै चलखेलमा मात्र मन्त्रमुग्ध हुँदा नेपालमा पनि भारतमा नै जसरी कोरोना संक्रमण हुने खतरा हुन सक्छ । जसका बारेमा यहाँ कोही सचेत नै छैन ।
कोइरालाका अनुसार बिहीबार पनि १० जनामध्ये २ जनामा लक्षण देखिएको थियो । एक जना कालीमाटीमा तरकारी पसल गर्ने पुरुष हुन् । उनी पनि भारतबाट फर्केका हुन् । त्यस्तै, बाराका एक स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्वरो देखिएपछि उपचारका क्रममा काठमाडौं आए, परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो । श्रीमतीको स्वाब परीक्षण गर्दा उनलाई पनि कोरोना देखिएको छ ।दुवैमा कोरोनाको लक्षण पाइएका कारण काठमाडौँको समुदायमा पनि कोरोना फैलिइसकेको पुष्टी हुन्छ । तर सरकार यसलाई स्विकार्न भन्दा लुकाउन उद्यत छ । कारण हो सरकारले समुदायमा न परिक्षण गर्छ । न सस्तोमा परिक्षण आँफै गर भन्छ । बरु सरकारले सीमानामा कम परिक्षण गरेर कोरोना संक्रमित भएको नाटक भने राम्रैसँग जानेको छ । जसका कारण मह ामारी झनै तिब्र गतिमा फैलिन खतरा बढ्दो छ ।